एप्पल एप्पल आईडी वेबसाइट अपडेट गर्दछ आईफोन समाचार
एप्पलले नविकरण गरेको छ एप्पल आईडी वेब धेरै डिजाइनको साथ अधिक आकर्षक र म कम गम्भीर भन्छु। आज सम्म, जब हामी पहुँच गर्यौं appleid.apple.com हामीले एक पृष्ठ जस्तो देख्यौं जुन तपाईंले काट्नु भए पछि देख्नु हुनेछ। तपाईले यस पोष्टलाई हेडिंग गर्ने छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, हालको एप्पल आईडी वेबसाइटको तस्विरमा बाकस रहेको छ कि हाम्रो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बीचमा राखिएको छ, जहाँ यो देखिन्छ। icloud.com, तर त्यहाँ दुई भिन्नताहरू छन्: पृष्ठभूमि छवि, जहाँ हामी काट्न स्याउको धेरै उपकरणहरू देख्न सक्छौं, र त्यो एप्पल आईडी पृष्ठमा, यदि हामीले दुई-चरण प्रमाणिकरण सक्रिय गरेका छौं भने, विश्वसनीय उपकरणहरू फरकमा देखाईन्छ।
एक पटक हामीले पहुँच गरे पछि हामीसँग पहिले जस्तै उस्तै विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन्, जस्तै खाता परिमार्जन, सुरक्षा कन्फिगर गर्ने, उपकरणहरू जुन हालै हाम्रो एप्पल आईडी प्रयोग गरिरहेका छन् (के यो हो?) र भुक्तान विधि। अघिल्लो संस्करण विपरीत, हामीसँग अब छ समान पृष्ठमा सबै विकल्पहरू र हामी केवल ती पहुँच गर्न तल जानुपर्नेछ। डिजाइन र टाइपोग्राफी पनि केहि परिमार्जन गरिएको छ, अब धेरै सफा अनुभूति, केहि चीज जुन सँधै सराहना गरिन्छ।
अर्को तर्फ, यो अब विश्वसनीय उपकरणहरू हटाउन धेरै सजिलो छ। अहिले सम्म मैले मेरो एप्पल आईडीबाट मेरो पुरानो आईफोन अनलिink्क गर्न सकेको छैन, तर अब यो हाम्रो निर्णयलाई क्लिक गर्ने र स्वीकार गर्ने जत्तिकै सरल छ। हामी कुनै पनि उपकरणबाट लग आउट गर्न सक्छौं जुन समान पृष्ठबाट हाम्रो एप्पल आईडी प्रयोग गर्दैछ। संक्षेप मा, नयाँ डिजाइन धेरै आकर्षक र, एकै समयमा, प्रयोग गर्न धेरै सजिलो.
यो परिवर्तन वर्ष पछि समान डिजाइनको साथ र एप्पल स्टोर पृष्ठ सहित एप्पलको बाँकी वेब पृष्ठहरूमा केही परिवर्तन पछि आएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पल सफाई डिजाइनको साथ एप्पल आईडी वेबसाइट अपडेट गर्दछ
एप्पलले आईफोन s हरूलाई स्प्याम अनुप्रयोग स्टोरबाट प्रमोट गर्दछ